Ukufakwa amanothi insimbi engagqwali multistage futha centrifugal - China Shanghai SOG Pumps
I Amanothi Ukufakwa ngoba Engagqwali multistage centrifugal Pump:
1. Kusukela insimbi engagqwali multistage centrifugal ukufakwa futha ubuchwepheshe, igemfe ukuncela kudinga uphawu isimo esiqinile, asikwazi ukuba ipayipi ukuvuza noma ukuvuza, kungenjalo uzobhubhisa degree cleaner at itheku amanzi kwe-futha, kubangele okukhiphayo amanzi futha kuyinto encishisiwe, noma uzophiwa sisikhulu kakhulu weza ezokukha amanzi. Ngakho-ke, kumelwe ngobuqotho ekwenzeni umsebenzi omuhle e-esibonakalayo iphayiphi ukuqinisekisa izinga ukwakhiwa uxhumano iphayiphi.
2. Kumele waveza ukuthi lapho ikhanda futhi izinga lokushisa kwamanzi insimbi engagqwali multistage futha centrifugal futhi amapayipi centrifugal ukufakwa futha bengafani izimo zokuhlola, uma ekuphakameni lwasendaweni amamitha angaphezu kuka-300 noma izinga lokushisa amanzi akhishwa idlula 20 degrees Celsius, ukubaluleka ibalwa ngeke ukulungiswa. Okungukuthi, abangabantwana umfutho womoya ezindaweni eziphakeme ezahlukene kanye elihlale umusi ingcindezi ngaphezu kwezinga lokushisa lamanzi ka 20 degrees Celsius.However, lapho izinga lokushisa lamanzi ingaphansi degrees 20 Celsius, le elihlale umusi ingcindezi kungaba azinakwa.
3. Ukuqinisekisa ukufakwa futha ukuphakama (ie ukuncela). Lokhu ukuphakama libhekisela isikhawu mpo phakathi kwamanzi futhi isikhungo yomugqa we impeller futha. Akumelwe kudidaniswe ovumelekile ukuncela ukuphakama. Ukuphakama cleaner okuvumelekile futha amanzi ncwadi umkhiqizo elucidation noma nameplate kubonisa ukubaluleka cleaner ngaleso sigaba itheku kwe-futha amanzi. It sasibalwa ngovimba ukuhlola ngaphansi kwengcindezi evamile emkhathini futhi lokushisa lamanzi lika 20 degrees Celsius. Akukona cabanga ukugeleza kwamanzi emva ipayipi ukuncela is ifaniswe. Ukuphakama futha iyunithi kufanele kube nenani wendawo ezisele ngemuva ngokuvumela ukuphakama cleaner ukuba zibanjwe ngemva kokushona emgqeni ukuncela ipayipi ukuncela. Ukuphakama futha iyunithi ayikwazi ukudlula ukubaluleka ibalwa. Kungenjalo, futha amanzi ngeke ekhiphela up.
4. Umthelela yenani ibalwa iyinhloko -loss ngenxa ipayipi ukumelana ipayipi ukuncela. Ngakho-ke, kuhle ukuba amukele piping ilungiselelo emfushane futhi ufake nokufakwa indololwane ngangokunokwenzeka. Libuye icatshangwe ukuze ngokufanele ahlele amapayipi nabanye calibers ukunciphisa ukugeleza rate ku amapayipi.